Ntụle ndụ na-agụ - Ọgụgụ ọgụgụ isi n'ịntanetị
Ịgụ akwụkwọ ọgụgụ mmụọ nke oge a > Nyochagharị Ndụ Ndụ
Zụlite omenala nkwụnye ihe eji eme ka ịchọta nke ọma maka ịgụta akwụkwọ ọgụgụ isi
Inyocha nlezianya nke uche tupu ị ụgwọ
Ịnwere ike ịtọọ oge oku n'ọdịnihu
All psychics ga-agafe ule na-agụ akwụkwọ na ikpe mpụ na-arụ ọrụ maka LifeReader
Ntinye mmemme nke naanị $ .19 nkeji maka nkeji 10 mbụ gị
Nhọrọ nkwurịta okwu dịgasị iche gụnyere ekwentị, nkata, na email
Nkọwapụta uche zuru oke iji nyere gị aka ịhọrọ ọkachamara kachasị mma maka gị
LifeReader na-enye onyinye nlekọta ahụike kemgbe 2008
Enweghị nkwa e nyere na weebụsaịtị ma ọ bụrụ na enweghị afọ ojuju na ịgụ
Ọnụ ọgụgụ ọrịa uche na-agba elu karịa ụlọ ọrụ ndị ọzọ
LifeReader na-ewe usoro nyocha ha iji nwee ike ịgwọ ọrịa uche, gụnyere akwụkwọ nyocha na nyocha nke ndị omempụ na nhazi ọrụ. Nke a na-eme ka o doo anya na a na-egbute ndị ọkachamara na ndị ọkachamara ahụmahụ ahụ, n'ihi ya ọ bụ naanị ihe kasị mma ka ebipụ.
Nchọpụta nchọta nchọta ha dị ntakịrị na nhọrọ, naanị inye ọchụchọ site na ọnụahịa, ọnụ ọgụgụ kpakpando na ndị kachasị ọhụrụ na saịtị ahụ. Otú ọ dị, onye ọ bụla profaịlụ psychic na-adị ukwuu na-omimi karịa ọtụtụ psychic agụ na ebe nrụọrụ weebụ, dabere na ole ọrụ ahụ psychic tinye na ha na peeji nke. Chọgharịa nzaghachi nke onye na-enye ndụmọdụ iji nweta echiche nke otu ha si emeso ndị ahịa ndị ọzọ tupu ị họrọ.
LifeReader ndị ọkachamara na-ekwu banyere ihe ndị ọzọ karịa ụfọdụ weebụsaịtị, ma onye ọ bụla agafewo usoro nyocha nke ọma ma nwee ike bụrụ ndị ndụmọdụ nwere ahụmahụ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ị nwetara ihe ị na-akwụ ụgwọ, ma ọ bụ na ị ga-anọrịrị na nke a. Ị nwere ike iji ohere nke mmeghe nke mbụ nke 10 nkeji naanị $ .19 nkeji nkeji, n'ihi ya i nwere ike ịnwale otu onye ndụmọdụ ma ọ bụ abụọ nwere ọgụgụ isi na obere ego.
Ị nwere ike iji nkwurịta okwu gị na onye na-enye ndụmọdụ gbasara ahụike na-ekwurịta okwu site na ekwentị, nkata, ma ọ bụ ozi-e, dabere na mmasị onye ahụ maka otu ha si enye ọrụ ha. Ọbụna ị nwere ike ide oge maka oku tupu oge eruo, kama ịnwa ịchọta ọkachamara gị ọkachamara n'ọfụma.
Ọ bụ ihe ijuanya na na weebụsaịtị na-akpacha anya maka ịchọta ihe ndị ahụ ha na-akwụ ụgwọ, na ha adịghị enye ụfọdụ ụdị nkwa, ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ na ha enweghị otu e kwuru na weebụsaịtị. Ọ bụ ezie na ị nwere ohere ka mma iji nweta ọgụgụ dị ukwuu mgbe ị na-ahọrọ site na ọdọ mmiri nke ndị ọkachamara na-ahụ maka ahụike uche, mgbe ụfọdụ ị na-esonyere otu ọkachamara. Onyinye na-enye nkwụghachi ma ọ bụ akwụmụgwọ ga-abụ nnukwu ihe onwunwe nye ebe a na-agụ akwụkwọ mkparịta ụka nke a na-akwanyere ùgwù.
na LifeReader, ị nwere ike ịkwụ ụgwọ ntakịrị karịa ụfọdụ ebe nrụọrụ weebụ na-agụ akwụkwọ ọgụgụ isi, ma ị nwere ike ijide n'aka na onye ọ bụla na-enye ndụmọdụ ị kpọtụrụ na saịtị ahụ ejiri nlezianya nyocha ma maka ikike ahụike na maka mpụ ọ bụla. Mgbe ụfọdụ, ọ bara uru ka ị kwụọ obere ụgwọ, karịchaa ma ọ bụrụ na ị na-abịakwute nduzi uche mmụọ dịka ihe dị oké mkpa na ọ bụghị naanị ihe nzuzu iji mee maka ntụrụndụ.